Properties for Sale in Mayangone - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Mayangone
Ad Number S-10016619
ကမ်ဘာအေး စာတိုကျမှတျတိုငျအနီး အိမျနှငျ့ခွံ ရောငျးမညျ။
Ad Number S-10016581
Ad Number S-10016560
မရမျးကုနျးမွို့နယျ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးမအနီး အသငျ့နေ လုံးခငျြးအိမျရောငျးမညျ
🔰မရမျးကုနျးမွို့နယျ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးမအနီး အသငျ့နေ လုံးခြ...
Ad Number S-10015782
Sales for house
Ad Number S-10015131
Ad Number S-10013459
Ad Number S-10020093
For Sale @ Pauk Zedi Street (2) 8 Miles,Mayangone.
Ad Number S-10019572
မရမျးကုနျးမွို့နယျရှိ ပအေကယျြ(47 × 56) လုံးခငျြးတိုကျ စြေးတနျတနျ​လေးနှငျ့ ​အမွနျ​ရောငျးမညျ
Ad Number S-10019016
စတုရနျးပအေကယျြ (1425sqft) Facility အပွညျ့စုံပါဝငျသညျ့ မောရဝတီ Condo ခနျးလေးရောငျးမညျ
Ad Number S-10019015
Ad Number S-10019014
Ad Number S-10018413
Ad Number S-10018311
မရမ်းကုန်း အသင့်နေ လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်
Ad Number S-10018196
Aung Thitsar Real Estate Close
Ad Number S-10018173
Ad Number S-10018172
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး အကျယ် ၂၅.၃၄ ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းသည် ။ မြို့နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်နှင့်မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မြောက်ဥက္ကလာပနှင့် ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် လှိုင်မြစ်နှင့်လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ်နှင့် လှိုင်မြို့နယ်တို့ ဝန်းရံတည်ရှိသည် ။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်သည် ရပ်ကွက်ပေါင်း ၂၀ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး မူလတန်းကျောင်း ၃၀ ကျောင်း ၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၇ ကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်း ၅ ကျောင်း ရှိသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းအများအပြားရှိသောမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်စေတီများ အများအပြားတည်ရှိသည် ။ မရမ်းကုန်း ၉ မိုင် ၊ ပြည်လမ်းဆုံရှိ အောင်ရွှေဘုံသာ ဓမ္မဗိမာန် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ သီရိမင်္ဂလာကမ္ဘာအေးစီတီတော် ၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းရှိ ကျိုက္ကလဲဘုရား နှင့် ကျိုက္ကလို့ဘုရား ၊ ကျိုက်ဝိုင်းလမ်းရှိ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းတို့သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် လူသိများ အထင်ကရ နေရာများဖြစ်ကြသည် ။ ထို့ပြင် ရှေးယခင်ကတည်း ခရစ်ယာန်သာသနာပြု ဘုရားရှိုခိုးကျောင်းကြီးများဖြစ်သည့် စိန့်အက်ဒ်ဝပ် ရောမကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၊ စိန့်ဂျော့ အန်ဂလီကန် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ လည်းရှိပြီး ယခင်က စစ်မှုထမ်းအရောရှိဟောင်း သင်တန်းကျောင်း (ယခု) တပ်မတော်အရိုးအထူးကုဆေရုံကြီး ရှိသည့်မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုတော် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်သည် စေတီပုထိုးများ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ လည်း အလွန်ပေါများသောမြို့နယ်ဖြစ်သလို ရန်ကုန်မြို့၏ အရေးပါသော ပြည်လမ်းမကြီးနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် အချက်အချာကျသော မြို့နယ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေသည် ။